७० बर्षको उमेरमा पनि धो’क्रो बोकेर हिड्ने शेर्पा बा को जीवन एसरी चल्दै छ! पत्रकारलाइ किन झ’पारे?:: Mero Desh
७० बर्षको उमेरमा पनि धो’क्रो बोकेर हिड्ने शेर्पा बा को जीवन एसरी चल्दै छ! पत्रकारलाइ किन झ’पारे?
Published on: ७ भाद्र २०७८, सोमबार ०३:०४
१२ भाइ छोरा १३ भाइ नाति बुढाको धोक्रो काधैमाथी भनेको जस्तै ताप्लेजुङका पासाङ शेर्पा ७० बर्षको उमेरमा पनि एक धोक्रो मकै बोकेर उकाली ओराली गर्छन। उनको परिवारमा उनको श्री’मती र शेर्पा दुई बुढा बुढी मात्र बस्छन। ७० बर्षको उमेरमा पनि गाई ,बाख्रा ,कुखुरा बंगुर पालेर बसेको बताउछन शेर्पाले।
उनले बोकेको एक धोक्रो मकै मिलबाट पिसेर ल्याउदै गरेको बताए। त्यसरि पिसेको मकैको पिठो गाई बाख्रालाइ आफुहरु समेत ढिडो बनाएर खाने र जा’ड बनाउने गरेको बताए शेर्पाले। बोल्न र हास्न निकै रमाइलो गर्ने शेर्पाले उमेरमा धेरै ठाउँ घुमघाम गरे पनि आफ्नै देशको राजधानी काठमाडौ चाहिँ नपुगेको बताए। पूरा समाचार तलको भिडियोमा हेर्नुहोस्!
पाँच गोलको थ्रिलरमा बायर्न म्युनिखले कोलोनलाई हराउँदै बुन्डेस लिगाको नयाँ सिजनमा पहिलो जीत हासिल गरेको छ । आइतबार राति भएको खेलम बायर्न ३–२ गोलले विजयी भएको हो । पहिलो खेलमा बायर्न बोरुसि या मोचेनग्लाडबाचसँग बराबरीमा रोकिएको थियो ।खेल को ५० औँ मिनेटमा रोबर्ट लेवान्डोस्कीले गोल गर्दै बायर्न लाई अग्रता दिलाएका थिए ।
८ मिनेटपछि सर्जी ग्नाब्रीले बायर्नको अग्रता दोब्बर बनाए । तर, लगत्तै एन्थोनी मोडेस्टे र मार्क उथले गोल गर्दै खेल बराबरी गरे । ७१ औँ मिनेटमा ग्नाब्रीले अर्को गोल गर्दै टोलीलाई जीत दिलाए ।लेवान्डोस्कीले पछिल्ला १२ वटा लिग खेलमा गोल गरेका छन् । यसक्रममा उनले १९ गोल गरेका छन् । पछिल्लो पटक लिगमा उनले गत फेब्रुअरीमा गोल गर्नबाट चुकेका थिए।